I-Amazon tracker tracker isebenza njani?
Ukubonelela abathengi ngexabiso eliphezulu, ama-Amazon ahlaziya ngokuqhubekayo amanani. Inika ithuba kubasebenzisi ukuthenga imveliso abayifunayo ngentengo yokhuphiswano. Ukongezelela, ezinye izixhobo ezikhethekileyo zisebenzela ukulandelela utshintsho lwexabiso kumveliso othile - hosting gratis website. Ngokomzekelo, isofthiwe ye-intanethi ebizwa ngokuba yiCamelCamelCamel inikezela abathengi ngezilumkiso malunga nokuphakanyiswa okanye ukuhla kwexabiso. Kukho nezinye iiprogram zokulandelela i-Amazon ezithengisa kakhulu iinkqubo zokomeleza i-brand e-Amazon.
Kulo thuba elifutshane, siza kuxoxa ngezona zixhobo zengcali zokulandelela ama-Amazon kunye nezixhobo zokuhlaziya ama-Amazon.
Amathuluzi okulandelela amaxabiso e-Amazon
Wonke umntu othengisa umrhweba kwi-intanethi kufuneka aqhubele phambili ukulandelela ukuphumelela kwakhe kwiphulo lokuphumelela nokulinganisa inzuzo yonyaka ngamnye. Kule mhlathi siza kuxoxa ngezona zixhobo ezintle kakhulu ze-Amazon Seller ezingakuzisa umvuzo ophezulu. Kunengqiqo ukusetyenziswa kwezixhobo zokulandelela ngendlela enzima njengoko zixhasana kunye kwaye zinokukunceda ukuba ufumane i-Amazon yakho ngenzuzo kabini.
Isixhobo sokwenza umsebenzi wokubhala uluhlu
Ukufikelela kwisikhundla esiphambili kwiphepha lekhasi lokukhangela kwe-Amazon, kufuneka uqaphele ngokukodwa ukulungiswa kohlu lwakho. Esi sixhobo senzelwe ukukunceda ukudala uluhlu oluchanekileyo lokufikelela kwigama elingundoqo kunye nokwandisa izinga lokuguqulwa kwakho, eli lilodwa leemilinganiselo ze-Amazon eziphambili. Esi sixhobo sinokukunceda ukuba wenze i-tweaks esebenzayo ukukhuthaza ukuthengisa kwakho kunye nokuphucula amanye ama-metrics asetshenziswayo ngokukhawuleza.
Izaziso zokuhlaziywa ezingalunganga
Inani kunye nomgangatho wee-Amazon iimpendulo zidlala indima ebalulekileyo kwiphepha lesigaba sakho sephepha. Ukuphononongwa ngakumbi okulungileyo, abasebenzisi bamathuba aphezulu baya kuthenga iimveliso zakho. Kuthetha ukuba ukuphononongwa okungahambi kakuhle kunokunyusa izinga lokunciphisa kwaye kubangele ukubeka amanqanaba. Iingxelo ezimbi zenzeke kwi-Amazon, nangona unomkhiqizo ophezulu. Udinga ukusingatha zonke iimpendulo zakho ezingalunganga ukulawula imeko.
I-AMZ Tracker's Review Review Izaziso zesiThengisi ziza kukunika izaziso ngexesha ngalinye umntu eshiya impendulo engalunganga. Kuya kukunceda ngokukhawuleza ukuphendula kuzo zonke izinto ezingenzileyo kwaye wenze konke okusemandleni akho ukuxazulula ingxaki yakho yinklayenti yakutshanje. Ukuba unokwazi ukuxazulula umcimbi wabathengi ngokukhawuleza, baya kukhangela okanye baphendule ukuhlaziywa kwangaphambili.
Ukukhawuleza ukukhula kwebhizinisi le-Amazon ngokusebenzisa i-Analytics
I-Amazon Analytics yindlela yokulandelela isetyenziselwa abathengisi abaqhuba ukukhula kwe-Amazon yakho shishini. Esi sixhobo sikunika ithuba lokuhlalutya indlela yokuthenga abathengi kubasebenzi bakho kwaye ufumane ixesha elifihliweyo lixesha. Idatha efumanekileyo iya kukunceda ukuba uqhube umkhankaso wokuphumelela wePPP Amazon. Ngaphezu koko, le-AMZ i-Analytics inceda ukwenza uphando lwegama elingundoqo kwaye ibonise ukuba yintoni imigaqo yophando eyenza kakuhle kwaye kufuneka ibuyiselwe kwakhona. Ngokuncediswa kwegrafu ze-Amazon Analytics, unako ukubeka ingeniso yakho ngeniso yeveki nganye, inyanga okanye unyaka. Kuya kukubonisa ukuba zeziphi iimveliso eziqhuba kakuhle kwaye apho ibhizinisi lakho lifuna ukuphucula.